मेरो जित कसैले रोक्न सक्दैन्ः वाम उम्मेदवार लेखराज भट्ट (अन्तर्वार्ता) - Dainik Nepal
मेरो जित कसैले रोक्न सक्दैन्ः वाम उम्मेदवार लेखराज भट्ट (अन्तर्वार्ता)
दैनिक नेपाल २०७४ कार्तिक २७ गते १७:२१
२०२८ सालदेखि निरन्तर कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भई सक्रिय राजनीतिमा संलग्न माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा ७ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्ट बामगठबन्धनबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिने भट्ट साविक सुदूरपश्चिम (हाल ७ नम्बर प्रदेश) का लोकप्रिय र विकासप्रेमी नेता हुन् । अध्ययनशील नेता भट्टलाई सुदूरपश्चिमको इतिहास, भाषा र सस्ंकृतिबारे पनि राम्रो ज्ञान रहेको छ । प्रस्तुत छ नेता भट्टसँग चुनावी माहोलबारे पत्रकार टंक कुँवरले गरेको कुराकानीः
– चुनाव नजिकै आइसक्यो तयारी कस्तो छ ?
बाम गठबन्धनसँग तालमेल गरेको तपाईंलाई थाहा नै छ । हामीले पहिलो चरणअन्तरगत वडाभेला, जनसम्पर्क कार्यालय स्थापना, जनबर्गीय संगठनलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्ने काम गरी चुनावी प्रचारप्रसारमा लागिरहेका छौं । केन्द्रबाट घोषणा पत्र पुग्ने बित्तिकै घोषणा पत्र सहित जनताको घरदैलोमा जाने योजनामा छौं ।
– तपाईंले कैलाली ४ नै किन रोज्नुभयो ?
वर्षौदेखि मेरो बसोबास यही क्षेत्रमा नै छ । यसअघि २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा पनि यही क्षेत्रबाट जितेर तीनपटकसम्म मन्त्री भए । वर्षौदेखि यहाँका जनतासँग भावनात्मक सम्बन्ध हुनुका साथै उहाँहरुको हर सुखदुखमा साथ दिँदै आएको छु त्यसैगरी उहाँहरुले पनि मलाई साथ सहयोग गर्दै आएका छन् । गठबन्धनबाट पनि यही क्षेत्रमा नै लड्नुस भनेर टिकट दिएकोले यो क्षेत्र रोजे ।
– जित्नु हुन्छ त ?
जित्ने मात्र होइन अत्यधिक मतका साथ जित्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु । राजनीतिलाई जहिल्यै पनि सेवाको रुपमा लिई २०३६ सालदेखि हर आन्दोलन र परिवर्तनमा मेरो ठूलो योगदान छ । मेरो संघर्ष र योगदानको सम्मानीत जनताजनार्दनलाई पनि राम्ररी थाहा छ । म सत्तामा हुँदा वा बाहिर हुँदा जहिल्यै पनि यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि अहोरात्र लागिपरेको छु । त्यही भएर पनि मेरो जित सुनिश्चित छ ।
– तपाईं तीनपटक मन्त्री हुनुभयो यस क्षेत्रका लागि के के गर्नुभयो ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रवेश बिन्दु हो । तर, यहाँ अझै जुन गतिमा विकास निर्माणका काम हुनुपर्ने हो हुन सकेका छैनन् । जहाँसम्म म मन्त्री हुँदाको कुरा छ म मन्त्री भएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना, गेटामा मेडिकल कलेज, दोधारचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह, गेटामा रहेको धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्ती लगायतका काम मेरै पालामा शुरु गरिएको हो । हाल यी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, गौरीफन्टानाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाका बनाउन पहल गरिरहेको छु भने क्षेत्रीय स्तरको आर्युबेद अस्पताल स्थापना, अत्तरिया–मोहना छ लेनको बाटो बनाउन मेरो अहंम भूमिका छ । सुकुम्बासी र मुक्तकमैयाको समस्या समाधानका लागि पहल, कमलरी, हलियाखलिया प्रथा हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
– चुनावको मुखमा एमाले र माओवादीबीच किन गठबन्धन बन्यो ? यो गठबन्धन कहाँसम्म पुग्छ ?
पहिलो कुरो कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनता उत्साहित छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनले नेपालमा धेरै परिवर्तन र जनतामा चेतना जगाई दिएको छ । कम्युनिष्टहरुको ६५ प्रतिशत मत हुँदाहुँदै पनि २५ प्रतिशत मत भएको काँग्रेससँग हामी प्रयोग हुँदै आयौं त्यसैले नेतृत्व तहबाट लामो छलफल, बहसबाट दीर्घकालिन सोचका साथ यो गठबन्धन बनेको हो । अब गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर स्थायी सरकार बन्छ र देशको आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा फड्को मार्छ । यो गठनबन्धन चुनावका लागि मात्र नभएर पार्टी एकतासम्म पुग्छ ।
– यस क्षेत्रको लागि तपाईंका एजेण्डा के के छन् ?
मैले आफ्ना एजेण्डा प्रष्टसँग राखेको छु । म राजनीतिमा लागेदेखि नै यहाँको विकासमा मेरो मुख्य चासो रह्यो । जनयुद्धमार्फत पनि सुदूरपश्चिमको विकासका कुरा उठाएँ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि झन् ससक्त बनाउन भूमीका खेले । सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्गजस्ता ठूलो आयोजना ल्याउन मुख्य भूमिका निभाएँ ।
नदी कटान रोक्न तटबन्धन, कृषि सडक कालोपत्रे गर्ने, पर्यटन विकास, उद्योगधन्दाको विकास, सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको वातावरण सिर्जना गर्ने, स्थानीयस्तरमै रोजगारीका सम्भावनाको खोजी गर्ने र स्वरोजगारमृुलक कार्यक्रम ल्याउने लगायतका मेरा एजेण्डा रहेका छन् ।
– बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्लान् त ?
अन्य दलका साथीहरुले राजनीतिलाई व्यापार जस्तो बनाएका छन् तर हामीले राजनीतिलाई सेवाका रुपमा लिएका छौं । त्यसलाई रोक्न र काम गर्न सक्षम नेतृत्व छान्न जनता अब चुक्दैनन । सबैको साझा प्रतिनिधि भएर काम गर्ने गठबन्धनको प्रतिवद्धताले विपक्षी दलका कार्यकर्ता र त्यो लाममा रहेका भनिएका मतदाताहरुले पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विस्वास गरेकाले जित्नेमा कुनै शंका नै छैन् ।
अमेरिकाबाट माधव नेपाललाई ओलीको खरो जवाफ, हेर्नुस् भिडियो
बैंकर अजय मिश्र : जसको जीवनमा ‘असन्तुष्टि’लाई मौका छैन